ပန်းကမ္ဘာ: January 2012
၁။ ဖြုတ်ကနဲ ဖြုတ်ကနဲ ဆိုပြီးသစ်ရွက်တွေ ရင့်ရော်သီးကင်းလေးတွေ သွေ့ခြောက်ပြီးကြွေကျနေလိုက်တာ၊အချိန်တိုင်းပဲ၊၂။ ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ ကြာပန်းလေးတွေနေလောင် ညှိုးနွမ်းတာကို မြင်ပြီးမဟာပဒုမဇာတ်တော်မှာ မင်းသားငါးရာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊
၃။ ဒီနေ့ ဦးကြီးတယောက်ဆုံးတယ် တဲ့၊ခေါင်းမူးတယ် ဆိုပြီး ထာဝရ အိပ်စက်သွားလေရဲ့၊အသက်(၈၅) နှစ်ကျော် အဘိုးအိုတစ်ယောက်အတွက်ရက်ပေါင်းများစွာ သီလတွေစောင့်ခဲ့၊အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဒါနတွေပြုခဲ့၊ဘာဝနာတွေ ပွားများခဲ့တာတွေက အတုယူစရာပါပေ။
၄။ ရင့်မှည့်နေတဲ့ သစ်သီးတစ်လုံး ကြွေကျသလို၊သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲမြေခခဲ့ရတာ ၀မ်းနည်းစရာ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊ပန်းတွေ ကြွေတာလဲ ခဏခဏ၊သစ်ရွက်တွေ မြေခတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်၊တွေ့နေပေမယ့် တရားမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး၊
၅။ နောက်ဆုံးမှာတော့…ကိုယ်မသိ၊ မမြင်ဖူးသူတွေလဲ ဖြုတ်ကနဲ၊မိတ်ဆွေတွေလဲ ဖြုတ်ကနဲ၊သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဖြုတ်ကနဲ၊ဆွေမျိုး မိဘတွေလဲ ဖြုတ်ကနဲ နဲ့အော်…ငါသာ အကယ်၍ဖြုတ်ကနဲ…ကြွေလွင့်ခဲ့ရင် ….
အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A ( ပန်းကမ္ဘာ )Date. 18.Jan. 2012
ရာဂဟူသည်၊ ယစ်မျိုးရည်သို့၊မကြည်ယုတ်မာ၊ လွန်ဆိုးစွာ၏၊သတ္တ၀ါဟူထ၊ သာမည၌၊ဘယ်မျှတစိ၊ ဆိုလွယ်ရှိအံ့၊ဗောဓိသတ္တ၊ ဘုရားအလောင်း၊ ရွှေဥဒေါင်းလျှင်၊မင်းပေါင်းခြောက်ဆယ်၊ ကြံလျက်ဖမ်းကာ၊ မတတ်ရာလည်း၊မာယာဆောင်ပြ၊ ဥဒေါင်းမ၌၊ရာဂလိုဆိုး၊ အိပ်ယာနိုးသို့၊ထိုးကျင့် ပြင်းစွာ၊ တပ်ခြင်းရာဖြင့်၊ယုတ်မာညစ်တေ၊ ဤကိလေကြောင့်၊ဥဒေတယံ၊ ဂါထာပျံကို၊ မအံရွတ်မိ၊သတိချွတ်ယွင်း၊ ညွတ်မိလျင်း၏။( ပုဒ်ရေ- ၂၉၄ )
ဂုတ္တိလောင်းချစ်၊ စောင်းသံယစ်၍၊ ဖွင့်လှစ်ထားမြောက်၊လေသောက်ဟင်းလင်း၊ ပြူပြတင်းက၊ခုန်ဆင်းထွက်လာ၊ ပြည့်တန်ဆာလျင်၊မြေမှာလဲကျ၊ သေဆုံးစွတည်း။( ပုဒ်ရေ- ၂၉၄ )